အိမ်မက်စေရာ: January 2011
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မက်တွေကို တခါတလေမှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်အတွက် ဖျက်ဆီးပစ်ရတက်ပြီး တခါတလေမှာတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် အပျက်စီး ခံရတက်တယ်..
ဒီနေရာလေးက လက်တွေ့မှာ မက်ခွင့်မရတော့တဲ့ အိမ်မက်တစ်ချို့ကို ဆက်လက် ရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ နေရာလေးပါ..
( အိမ်မက်စေရာ )
"ငါတို့ လမ်းခွဲရအောင်"...သူ့ဆီကမမျှော်လင့်ဘဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့် ကျွန်မ အရမ်းအံသြခဲ့ရတယ်..စကားမပြောတက်တဲ့လူတစ်ယောက်လို ကျွန်မသူ့ကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်..ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့လက်တစ်ဖက်လေထဲရောက်သွားတာတော့သိလိုက်တယ်..သေချာပြောရရင်သူ့ပါးပြင်ဆီကို.. ."ဖြန်း".."ကောင်းပြီလေ..ဘာကြောင့်လဲလို့ ငါနင့်ကိုမမေးဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက်က စလမ်းခွဲလို့ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ပြီးကျန်ခဲ့မယ့် မိန်းမမျိုးထဲမှာလဲ ငါမပါဘူး..နင်ထွက်သွားလို့ရပြီ".အဲ့ဒါ ကျွန်မပြန်ပြောခဲ့တဲ့ စကား..မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မာန အတွက် ဒီလောက်တော့ကျွန်မပြောသင့်တယ်လို့ထင်တယ်လေ..ဒါပေယ့် အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဖူးဆိုတာတော့ကျွန်မသိတယ်..ဘာကြေင့်လဲဆိုရင်ကျွန်မသူ့ကိုသိပ်ချစ်လို့လေ..သူနဲ့စတွေ့စဉ်က.......ဒီဒီ ဒါငါ့သူငယ်ချင်း ပြင်ဦးလွင်ကပြောင်းလာတာ..မင်းနိုင်ရဲ့ မိတ်ဆက်စကားကြောင့်ကျွန်မမော့ကြည့်လိုက်တယ်..ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးတစ်ခု..အော် အင်း လာလေ ထိုင်..အအေးသောက်ရင်းသူတို့ကို ခေါ်လိုက်တယ်... ကျွန်မဒီဒီ ပါ..မင်းနိုင်နဲ့က ရင်းနှီးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ..ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့် နာမည် ညီသန့် ပါ..အဲ့ဒီကစပြီးသူနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးခဲ့တယ် စားအတူ သွားအတူပေါ့...မင်းနိုင်ရဲ့ တမင်တကာ ရှောင်ပေးမှုတွေကြောင့်လဲ တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်မတို့တအားကို ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်..သူက ကောင်မလေးတွေရဲ့ အလိုက်ကို သိတက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် လူတဖက်သားကို အရမ်းကို ကူညီဖေးမတက်တယ်...ကျွန်မကို အမြဲအဖော်လုပ်ပေးတယ်..စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခြင်းမရှိတဲ့ ပကတိရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူ့ကို ကျွန်မတကယ်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..သူလဲ ကျွန်မလိုပဲလို့ထင်ပါတယ်..သိပ်မကြာခင်လေးမှာ သူကျွန်မကိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်...“ဒီဒီ” ..“ဘာလဲ ညီ”...“ဟိုဟာလေ ငါနင့်ကိုချစ်လို့”...“အမ်.”..အဲလို အရင်းမရှိအဖျားမရှိသူဖွင့်ပြောခဲ့တာ..ကျွန်မမှာ ရင်ခုန်ရမလို ထရယ်တော့မလိုနဲ့...ပြီးတော့ပြောသေးတယ် “ ငါနင့်ကို ညီမလေးလိုလဲ စောင့်ရှောက်ပါ့မယ်”တဲ့ ကဲကြည့်“ဟင့်အင်း ညီ ငါနင့်ရဲ့ ညီမလေးမလုပ်ချင်ဘူး” “ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒီ ငါ ငါ..နင် ဟာ နင်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလား ဒီဒီ” တကယ် ညီအရမ်းကို အတယ်...“ ငါနင့်ရဲ့ချစ်သူပဲလုပ်မယ်”...“ဒီဒီ တကယ်ပြောတာနော် နော် ဒီဒီ ဟုတ်လား”....ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ကျွန်မသူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်..ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲ သူကျွန်မအပေါ်အရမ်းကို အနွံတာခံခဲ့တာ..ကျွန်မဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ မရှိ..ဘာပြောပြောမငြိုငြင်တက်ခဲ့ဘူး..သူက အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးလေ...အော်သူ့ပုံစံလေးက အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ပြီး ဆံပင်အဝါရောင်ဆေးဆိုးထားတယ် ဆံပင်လဲနဲနဲရှည်တယ်..မိန်းမချောချောတယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်..ဖြူစင်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ညီက ကျွန်မထက်တော့ ၂ နှစ်ငယ်တယ်..တခါတလေ ကလေးလေးလို ဆိုးနွဲ့တက်ပြီး ကျွန်မဆုံးမရင် အမြဲလက်ခံတက်သူလေ..ဒီလိုချစ်သူမျိုးက လမ်းခွဲစကားစပြောလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ အိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး...ဒါပေမယ့်လဲ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်လောက်မှာ သူကျွန်မကို လမ်းခွဲခဲ့တာပါ...အကြောင်းပြချက်ကို ကျွန်မ မမေးခဲ့သလို သူလဲမပြောပြခဲ့ဘူး.....ဒါပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကို တစ်ရက်မှ မေ့မရခဲ့ဘူး ..ဘယ်နေရာသွားသွားသူ့ရဲ့အရိပ်တွေချည်းပဲ..နေ့တိုင်းပဲ ကြိတ်ငိုနေရတာ အရမ်းလဲ ပင်ပန်းတယ်...အစားလဲလဲ မှန်မှန်မစားနိုင်လို့ ဖျားခဲ့ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်..အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ကျော်လာတဲ့အခါ နဲနဲတော့နေသားရလာခဲ့တယ်..တစ်ရက် ကျွန်မပျင်းတာနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့တယ်..အပြန်ကျတော့ လေကောင်းလေသန့်ရှုချင်လို့မြစ်နားလေးက လမ်းလျှောက်ပြီးအပြန်ပေါ့..ဟိုးဝေးဝေးမှာ အရိပ်ကလေးနှစ်ခုလှမ်းမြင်သလို တစ်ခုသောအရိပ်က ကျွန်မနဲ့သိပ်ရင်းနှီးနေသလို..ဘုရား ဘုရား ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာပြီး လက်ဖျားတွေအေးစက်လာသလို...အရိပ်နှစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရချိန်မှာ..ခုန်နေတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသား လုံးဝရပ်တန့်သွားသလို အသက်ရှုတာပါ တခါထဲရပ်သွားသလို...အမလေး ညီလေ..ကျွန်မချစ်တဲ့ညီပေါ့...သူ့နားမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြည်နူးလို့ မုန့်တွေခွံကျွေးရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက် လောကကြီးကို မေ့ပြီးပျော်နေလိုက်ကျပုံများ......ကျွန်မနေရာမှာ တင်ဒူးတွေခွေကျသွားတယ်..အဲ့ဒီတော့ ကျွန်မရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် လာပြေးထူတယ်လေ....“ မထိနဲ့ ငါ့ကို မထိနဲ့”..ကျွန်မအသံ ဘယ်လောက်ကျယ်သွားလဲ ဘေးနားကလျှောက်သွားနေတဲ့ လူတွေလှည့်ကြည့်ကြတယ်....“ ညီ နင်က နင်က.....” စကားတွေထွက်မလာပါ..“ ငါနဲ့ လမ်းခွဲတာ....ဒါကြောင့် ..ဒါကြောင်..”..ကျွန်မစကားပြောနိုင်တဲ့အင်းအားမရှိတော့ပါ..အသက်ရှုလို့လဲမရတော့ပါ...သူတို့ပုံရိပ်တွေမှာ ဝေဝါးသွားရင်း...................ကျွန်မသတိရလာတော့ ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ကုတင်ပေါ်မှာ အနားမှာ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းမင်းနိုင်“မင်းနိုင်..ညီလေ..ညီလေ..သူ”“ဒီဒီ စကားမပြောနဲ့ နင်အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူလိုက်..အားလုံးငါ သိပြီးသား..”“ဘာ နင်သိတယ် ဘာကြောင့်ငါ့ကိုမပြောပြခဲ့တာလဲ”“ပြောတော့ရောဘာထူးမှာလဲ ဒီဒီ နင့်ကိုဒီထက်ပိုနာကျင်စေတာပဲအဖတ်တင်မယ် ဒီမှာ နင့်အတွက် ညီပေးခဲ့တဲ့စာ”ကတုန်ကယင်နဲ့ စာလေးကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်တော့....ဒီဒီတောင်းပန်တယ်ဆိုတာထက် ငါနင့်ကို ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး..တကယ်တော့ ငါနင့်ကို ညီမလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ချစ်ခဲ့တာ..ငါထင်တာ ငါ့မှာချစ်သူကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိရင် ငါ့ရဲ့စိတ်တွေမဖောက်ပြန်ဘူးထင်ခဲ့တာ..သူနဲ့မတွေ့ခင်အထိပေါ့ ဒီဒီ..သူနဲ့ရင်းနှီးပြီးနောက်ပိုင်း ငါကိုယ်ငါ ဘာလဲဆိုတာ ပိုသေချာသိလာခဲ့တယ်...ညာချင်ပေမယ့် အသွေးအသားထဲက ခံစားချက်ကို ငါဖျောက်ပစ်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး...နင့်ကိုလဲ ဆက်ပြီးမလိမ်ချင်တော့လို့ ငါ နင့်ကို လမ်းခွဲခဲ့တယ် ဒီဒီ...ငါမှားတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်...တောင်းပန်ပါတယ် နင်က ငါ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း အမဆိုရင်လဲ ဟုတ်တယ်ညီမလေးဆိုရင် ဟုတ်တယ်...ဒီဒီငါနင့်ကို နာကျင်စေတဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်လဲ တစ်နေ့နေ့ ပြန်လည်နာကျင်ဦးမှာပါ..အဲ့ဒီနေ့ကို ငါ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးစောင့်နေပါတယ် ဒီဒီ.နင်ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ..ညီ............................................ .............................ကျွန်မကို ဟာသလုပ်ပြီးရယ်နေတဲ့ လောကကို ကျွန်မ ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ အန်တုနိုင်မှာတဲ့လဲ....ဒီလိုလူမျိုးကိုမှ ချစ်မိတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသားကို ရော ကျွန်မ ဘယ်လိုလွန်ဆန်ရပါ့မလဲ...မလဲ ပေါင်းများစွာနဲ့ နာကျင်နေတဲ့ ကျွန်မရင်ဘတ်ကြီး...ဖြစ်နိုင်ရင်ခွဲထုတ် ဖျက်ဆီးလိုက်ချင်တယ်...အရာအားလုံးတကယ်ကို ပြီးသွားခဲ့ပြီ...မပြီးနိုင်သေးတာက ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်တွေ..နာနာ ကျင်ကျင်ကြီး ဘဝကို ရှေ့ဆက်နေရတယ်..ပင်ပန်းလိုက်တာ ...အရင်ကထက် နှစ်ဆတိုးလာ သလို..တောင်းပန်ပါတယ်လောကရယ် ကျွန်မကို သနားသောအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခွင့်လေးပေးပါ....................
ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ..အာရှနဲ့ဥရောပ စပ်ထားတော့ တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်မှုရိတယ်..ကျွန်မလဲ စတွေ့ ခါစတုန်းက တော်လေး သတိထားကြည့်မိတယ်..အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန်ကျတော့ သူငယ်ချင်းက.. " ချစ်စရာလေးနော်" တဲ..အဲလိုက စလို့ အဲ့ဒီကောင်လေးကို စသတိထားမိတယ်..အလုပ်ဆင်းချိန်ရောက်တော့လဲ တွေ့ပြန်တယ်..အဲ့ဒီတော့လဲသူငယ်ချင်းက " ဟွန်း သူကအရှေ့မှာထိုင်တာ" တဲ့ ပြောပြန်တယ်..ကျွန်မသူငယ်ချင်းဆိုလို့ မြန်မာလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဥရောပသူလေးပါ..ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းက ကလပ်ကို တော်တော်နှစ်သက်ပါတယ်..မျက်လုံးပြာပြာလေးနဲ့ ကောင်လေးဆို သဘောကျတက်တယ်..ပွင့်လင်းပြီး ဘော်ဒါစိတ်တော့အပြည့်ရှိသူ စကားကို ရေပတ်မဝင်အောင်ပြောတက်သူပါ..ကျွန်မ နဲ့သူကြားမှာ အဲ့ဒီကောင်လေးအကြောင်းက ပြောစရာစကား တစ်ခု အဖြစအမြဲရှိနေတက်တယ်..သူဖြင့် ဝင်လာပြီဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မေးငေါ့ပြရာတာ အမော..အော် ကောင်မလေး တွေ တော်တော်ကဲကဲ ပါလားလို့လဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးမိပါတယ်...ဒါနဲစကားမစမကျွန်မမှာ ချစ်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကြော်ငြာဝင်ပါရစေ..သူငယ်ချင်းမှာလဲ ချစ်သူနဲ့ပါပဲ..အဲ့ဒီနေ့အပြန်မှာပဲ ချစ်သူနဲ့တွေ့တော့ ကျွန်မ ချစ်သူ့မျက်နှာကို သေချာကြည့်ပြီး "ဟွန့် ငါ့ချစ်သူလဲ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်"လို့ ပြောဖြစ်တယ်..သူကတော့ သူ့ပုံစံအတိုင်းဘာမှမမေးပါဘူး..အဲ့လိုမျိုးချစ်သူပါ..နောက်တစ်ရက်အလုပ်ဆင်းတော့လဲ ဒီကောင်လေးအကြောင်းပဲပြောဖြစ်ပြန်တယ်..ချစ်သူကိုအားနာလှပါပြီ..ဘာရယ်သဘောမဟုတ်ပေမယ်..စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးရယ်ပါ..အဲ့ဒီကောင်လေးက စကားသိပ်မပြောပါ..အလုပ်ချိန်လဲဖြစ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..သူ့အကြောင်းတော့ ကြားမိတယ်..ငယ်ငယ်ထဲက အမေက ထားပစ်ခဲ့တာတဲ့..အဖေက အခုကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလားပဲ .သေချာတော့မသိပါ..အလုပ်ဆင်းချိန်ရောက်ပါပြီ.."မြန်မြန်လုပ်နောက်ကျတော့မယ်. ""အင်းပါ..ပြီးပြီ အသေးလေးရဲ့"...သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကိုခေါ်တဲ့နာမည်ပါ"နောက်ကျနေမယ်..၂ မိနစ်လောက်နောက်ကျတာနဲ့ ငါ့ရထားလွတ်သွားမှာ".."မှီပါတယ်ဟာ..ဟဲ့ဟဲ့""ဘာဖြစ်တာလဲဟ""အရှေ့မှာလေ..""ဘာတုန်း..""ဟို ချစ်စရာလေး လေ..""အော် အင်း.."မှတ်တိုင်ရောက်တော့လဲ..သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျွန်မ စကားပြောနေတုန်း သူမရောင်မလည်နဲ့ ရောက်လာတယ်..သူငယ်ချင်းက.."ဟိုင်း" လို့ နှုတ်ဆက်တော့ သူက လဲပြန် "ဟိုင်း" တယ်.."ဘယ်လိုလဲ အစဉ်ပြေတယ်ဟုတ်..""အင်း ဒီလိုပဲ ပြေပါတယ်.."."လာလေ ငါတို့နဲ့အနောက်ဖက်မှာ လာစီး"..သူငယ်ချင်းကခေါ်လိုက်တာပါ..သူလဲလိုက်လာပါတယ်ရထားပေါ်ရာက်တော့ လဲ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်မနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာ ထိုင်ကြတယ်..စကားအပြန်အလှန်ပြောရင်းတော်တော်လေးရင်းနှီးသွားကြတယ်..ကျွန်မထင်ထားတာနဲ့မတူပဲ ကောင်လေးက တော်တော်လေးရဲတင်းသွက်လက်ပါတယ်..အေးအေးလေးလို့ ထင်မိတာ မဟုတ်ပါလားလို့ တွေးမိတယ်..ခဏနေတော့ဖုန်းပြောတယ်..ပြီးတော့ ကလပ်သွားမလို့တဲ့..အင်း အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တာပဲ ..သူငယ်ချင်း မလေးကလဲ ကလပ်ခပ်ကြိုက်ကြိုက်..အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းကမြည်လာတယ်.."ဖုန်းလာနေတယ်လေ"..ပါးစပ်ပိတ်မထားပဲ ပြောမိတယ်"နေပါစေ..ထားလိုက်""ဟွန်းးး.." သက်ပြင်းမောချမိတယ် ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းဆက်သူ ဟာ သူ့ချစ်သူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူရော ကျွန်မရော သိပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူမကိုင်ပါ..တစ်ချိန်ထဲမှာ ကျွန်မဖုန်းလဲ မြည်လာ ပါတယ်..ဟုတ်ပါတယ် ..ကျွန်မချစ်ရသူ ကျွန်မချစ်သူပါ..ဖုန်းမြည်တဲ့အချိန်မှာလဲ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေး ပေါ်နေပါတယ်..တမင်တကာ သူတို့မြင်အောင် ကိုင်မိပါတယ်.."ဟဲလို ကို...... အင်း ခဏနေတွေ့မယ်နော်.."အလုပ်ဆင်းချိန်တူတဲ့အခါချစ်သူနဲ့ ကျွန်မတွေ့ဖြစ်ပါတယ်..ရထားပေါ်ကဆင်းတော့ သူငယ်ချင်းကျွန်မနဲ့ မလိုက်နိုင်ပဲ တွက်ထိုးမဆုံး..အော်သူ့ချစ်သူကို အဆီမဆိုင်အားနာမိပြန်တယ်..ထားလိုက်ပါတော့..ကျွန်မတော့ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်လို့ ချစ်သူတွေ့ဖို့..ပြီးရင်...ချစ်သူကို sorry ပြောဖို့လဲ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်..တခြားကောင်လေးအကြောင်း စဉ်းစားမိလို့..ချစ်သူကတော့ သူ့ပုံစံအတိုင်း ကျွန်မခေါင်းလေးကို ပုတ်ပြီး ပြုံးနေဦးမှာ မြင်ရောင်သေး..ပြီးရင် ကဲတော်ပြီ လာတစ်ခုခုသွားစားရအောင် ဆိုပြီး ကျွန်မကြိုက်တဲ့ ကွေ့တီယို လိုက်ကျွေးပါလိမ့်မယ်..အဲ့ဒါ သူ့ရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ အပြုအမှုလေးပါ..အမြဲတမ်းလန်းဆန်းတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ နားလည်တက်သူ..အဲ့ဒါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ချစ်သူဘဝပေါ့..သူတို့ ဥရောပသူတွေနဲ့မတူစွာ လေးနက်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ပါ..အမြဲတမ်းခိုင်မြဲအောင်လဲ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားနေမှာ..သားတွေ သမီးတွေရတဲ့အထိပေါ့နော်..အဲလို အတွေးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတုန်း...သူငယ်ချင်းက ဟိုဖက်ရထားလမ်းတဖက်ကနေ လက်ပြပြီး မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြသွားလေရဲ့..ကျွန်မလဲ လက်ပြန်ပြလိုက်တယ်...အင်း မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ ကြားရဦးမယ်..ရင်လှိုက်သဲဖို သူ့ရှဲ့ဇာတ်လမ်းကို...အချစ်မပါ အနှစ်သာရမရှိတဲ့..ခဏတာ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တွေ................................ဘယ်တော့များမှာအဆုံးသတ်မှာလဲလို့ တွေးရင်း..................................ကျွန်မခြေလှမ်းတွေက စောင့်နေတဲ့ ချစ်သူဆီကို ဦးတည်လို့ ....................
မြတ်နိုးတွယ်ငင်သံယောဇဉ်ဖြင့် ကြင်နာသမှုအစပြု၍နွယ်ရစ်နှေင်ချည်ချစ်မိနေသည်.....အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်က ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ..ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ အချိန်လဲမလောက်တာနဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ ကဗျာလေးချရေးဖြစ်ခဲ့တယ်... Posted by
အိမ်မက်ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကို နှစ်သက်လွန်းလှပါသည်...ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နာမည်လေးကိုလဲ မြန်မာဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဖြင့် အိမ်မက်ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကလဲ ပါဝင်နေသေးပြန်သည်..ဒါကြောင့်လဲ blog title လေးကို အိမ်မက်စေရာ လို့ နာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့သည်..ကျွှမ်းကျင်စွာ စာရေးတက်သူတော့မဟုတ်ပါ..အနည်းငယ်အားငယ်မိပါသည်...ဒါပေမယ့် မမမယ်ကိုး ညီမလေးဝက်ဝံလေး တီတီဆွိ ကိုဇော် စသဖြင့် သူတို့blog လေးတွေကို ဖတ်ရင်း အားကျရင်းနဲ့ ရေးချင်တာရေးမယ်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်..
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း
အလည်ရောက်သူများ စကားလေးတော့ လက်ဆောင်ထားသွားနော်...
ဒီလိုပဲ ဟိုရေး ဒီရေးချစ်တဲ့သူတွေက လာဖတ်တယ်မချစ်တဲ့သူတွေက လာမဖတ်ဘူး..အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေက မန့်သွားတယ်နဲနဲပဲ ချစ်တဲ့သူတွေက မန့်သွားဘူး...း)
နှစ်သက်ရတဲ့ blog လေးများ..
101 Microsoft Visual Basic
" ဓါး "
စိုးကြီး .. သို့ .. ပေးစာ
သွင်းလိုက်စေချင်ခဲ့ သော “ ဂိုးတစ်ဂိုး ”
Everyone's Blog Posts - မြန်မာခရစ်ယာန်လူငယ်များ
တရားဟောချက် (ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းသူများ) Sermon (Peace Maker)
ချက်လေး: ကျွနုပ်နှင့် အိမ်သာများ
လာချင်ဦး ဟေ့ ချဉ်ကာဘူ (Singapore)
KP-3 Expand Images On Mouse Hover Using CSS3
ဟိတ် ဘယ်မှာလဲအိမ်မက်ဖိနပ်တစ်ဖက် လိုက်ရှာနေတာကို ခုပြန်ပေး ...း)
Friends18.com Disney Scraps
အိမ်မက် စိတ်မကောင်းဖြစ်တိုင်း ဖတ်မိတဲ့ စာလေးပါ....
မျက်ကွယ်ပြုတယ်ဆိုတိုင်း ပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတိုင်း ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူး။အထီးကျန်တယ်ဆိုတိုင်း မပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ဘူး။ရယူပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုတိုင်း ထာဝရတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးရှုံးပြီဆိုတိုင်း နောက်တစ်ဖန်မပိုင်ရတော့တာ မဟုတ်ဘူး။လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတိုင်း စိတ်ဓာတ်ပျော့လို့ မဟုတ်ဘူး။ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ အလျင်စလို မပြောလိုက်ပါနဲ့။လောကမှာ အမှားနဲ့အမှန်ပဲရှိတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ကိစ္စတော်တော်များများရဲ့အဖြေဟာ တစ်ခုတည်းရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာ လျှောက်ဖို့လမ်းတွေ အမြဲရှိနေပါသေးတယ်။လက်လွတ်တတ်ဖို့ သိနားလည်သူဟာ ပေါ့ပါးတယ်။မေ့တတ်ဖို့ သိနားလည်သူဟာ လွတ်လပ်တယ်။စိတ်ညစ်ဖို့ သင်ဆင်ခြင်ပေးနိုင်ရင် ပျော်ရွှင်ဖို့ကိုလည်း သင်ဆင်ခြင်ရှာနိုင်ပါတယ်။နိုင်းနိုင်းစနေ ဘာသာပြန်သည်။